Ukuhlaziywa kwe-Yamaha Yamaha V-Star 1300 Tourer
Isingeniso: Ukuzisa i-Big Bore Cruiser kubantu
I-2016 Inkwenkwezi zeMoto zeV-Star 1300 Tourer. Basem Wasef
Kukho ukulungelelaniswa okubalulekileyo phakathi kwe-injini yokufuduka kunye nokucela intengo kwihlabathi labahambahambayo-kunye naso nasiphi na isithuthuthu, ngaloo nto. Iiinjini ezinkulu zilingana nama-premium aphezulu, kwaye ukongeza udidi lokubhenela olude olude luye lwaphakamisa i-ante kakhulu; Ivenkile ye-Harley-Davidson, i-intshi ye-cubic 103 (1,687cc) i-twin ebizwa nge-Street Glide, kwaye ukhangele iindleko ezingama-20,899 zokungena. Khetha ukhetho lwe -CVO lwesiko (ukuba ungayifumana enye), kwaye i-premium ikhuphuka kakhulu.
I-Star Motorcycles, abantu abasizisele i-Harley challengers njenge-raked-out Raider kunye ne-Sportster-like Bolt , ukupakisha ipakethe ethembisa nge-2016 Star Motorcycles V-Star 1300 Tourer. Kwintliziyo yebhayisiki (ixabiso eliyi-$ 12,390, elibandakanya i-windshield enokukhawuleza ngokukhawuleza kunye ne-backrest and a saddlebags) yi-intshi ye-cubic 80 (1,304cc) ene-60 deg ukuhanjiswa. I-Belt drive idityanisela kwisondo elingemuva, kwaye ngesisindo samanzi samanqaku angama-712, ngokuqinisekileyo akukho nto inqongophala yexabiso kunye nale phakheji ephezulu. Ukuphakama kwesihlalo kufana ne-inch e-27.2 ephantsi, kwaye ukumiswa kwe-telescopic elula (41.3 cm) yokuhamba, kunye no-4.3 intshi yokuhamba ukusuka kwi-monoshock yangemuva. Iibhenki ezingekho nge-ABS zisebenzisa iiyunithi ezingama-298mm ngaphambili kunye neyunithi yecandelo elilodwa lobubanzi obufanayo ngasemva.
Ngokuhambisana ne-V-Star 1300 ye-Tourer yeemfuno ezide ezide, i-tank enkulu engama-4.9-gallon kunye noqoqosho olulinganiselwa ku-42 mpg elilingana nolwandle olujikelezayo lwama-miles angama-200 ... kungeyona nto yezinto ezihamba phambili ze-bikes adventure, kodwa ngokuqinisekileyo ngokwaneleyo ukuphuma kwamandla amaninzi.
Yintoni efana nokukhwela le nkwenkwezi embi? Funda ukuze ufumane.
I-Star Motorcycles V-Star 1300: Endleleni
Umbono wepoppit we-2016 Star V-Star 1300 Tourer. Basem Wasef
Nangona ama-700 + iipounds ezibuninzi zenza ibhayisiki elimisa phambili nangaphambi kokuba uphakamise ngaphandle, ukukhwaza i-V-Star 1300 Tourer ibonakalisa indlela ephathekayo ephathekayo, sibonga inxalenye kwi-saddle ye-27.2-intshi eyenza ixabiso elihle lolo bunzima buyabhubha. Pushisa i-starter, kwaye i-60 degree i-twin ifikelele ebomini ngentshukumo enkulu. Ngokungafani nezinye iinjoni ze-Harley eziphangaleleyo, i-V-Star 1300 izandile ngakumbi i-modulated kwaye ilinganiswe. Nangona kunjalo, kukho umgangatho ohloniphekileyo kwi-thrum, into efumana inqaku elithile lokuchaswa nxamnye neengxabano zokuthi abaqhubi beJapan abanalo ubuntu obufanayo obufana ne- old-old, ephawulekayo ye-Harley-Davidson brand .
I-V-Star 1300 iqhosha kwisigxina nge-clunk eqinile, kwaye iinqwelo eziziintsuku ezintlanu zisasazeka ngaphandle, kunye nento evakalelwa ngathi inkulu. Nangona kunjalo, akukho nto iqinisekisa i-rpms yeenjini kunye nesalathisi esibonakalayo; akukho tachometer kwi-dash instrumentation eyenziwe lula (equkethe i-speedometer ene-LCD ye-inset yolwazi lokuhamba). Ngokungafani nezinye iimbonakalo ezininzi, ukukrola ngemisebenzi yeLCD akuyi kubonakalisa ijiniseli yejinjini.
Ukumangalisa kukukhanya okumangalisayo kunikwe ubunzima bebhayisikili, kwaye ukuyeka okukhawulezayo kunokuthi kufumaneke ngokubamba iqhosha le-lever right (nangona ibhayisiki iyancipha ngokukhawuleza xa i-freake yangemuva ibizwa nge-pedal right). Injini ithatha i-torque egciniweyo, nangona i-V-Star 1300 ivakalelwa njengentonga eninzi eshushu. Nangona kunjalo, kulula ukukhawuleza ukusuka kwiphina inxalenye yombutho wombane ngenxa yendawo yokufuduka kwayo enkulu, kwaye i-shifter ihamba kakuhle kwaye ilula nangona isenzo esichukumisayo sokutshintsha isenzo. Amanqanaba omoya emzimbeni wezithuthi ziza kuxhomekeka kubude bakho; nangona isantya esingaphantsi sasithula kakuhle, ndadibana ne-turbulence encinci kwinqanaba lomgwaqo ngenxa yendlela umoya ondibetha ngayo i-helmet (ndiyi-5'11 "). I-windscreen ekhutshwe ngokukhawuleza iguqula i-V-Star 1300 kwindawo ejikelezayo- i-cruiser yedolophu, kwaye igxininiswa kwaye iphinda iphakanyiswe lula ngokukhenketha okuphambili.
Emva komhla wokukhweleka, i-saddle ehambayo ibonisa ukuba ikhululekile kwaye ilula ukuhlala nayo, njengendlela yokuziphatha kwebhayisikili, ukunyuswa kokukhawuleza kunye ne-torque (kodwa i-saddlebags-tacked saddle bags) ayiyi kubamba yonke into eyongeziweyo). Injini ye-V-Star iziva ikhululekile kwizithuthi zomhlaba nangona i-speed-5 transmission. Omnye wezinto zethu ezimbalwa? Olunye uhlobo lokuqhuma kwe-drivel kwi-rpms eziphantsi kunye nokulawula okukukhanya kakhulu kunokuzijonga ngokukhawuleza kwimizila ethile yomgwaqo, okwenza umva wokugqibela uzive unganyaniseki xa kukho imvula yamanzi.
Ngaba i-Star Star V-Star 1300 Tourer ilungelo lakho? Impendulo ixhomekeka kwisitayela sakho kunye neemfuno zakho. Kwabanye abagibeli, akukho ndawo ithatha isayinari ye-mbatata-isatata (inokuba yinto eninzi kakhulu xa ivela kwimibhobho engenakuphazamiseka). Kwabanye, i-V-Star 1300 Tourer kunye nokusebenza kwenza ukuba kungabikho-brainer ephawula ezininzi zeebhokisi kwiqela elide lokuhamba. Ingaba yiyo i-V-Star ngokufanelekileyo kuwe, okanye ngaba ufanele uhambe ukuyothenga ezinye iindlela ezifana ne- Kawasaki's Vulcan lineup okanye amabhayisikili e-Suzuki Boulevard ? Impendulo, njengokufumana umlingane wakho wobomi, ibilisa kwi-chemistry: iya kumthengisi, uguqa umlenze, kwaye uzibonele ukuba zeziphi iibhayisikili ezihlaziya ngesitayela sakho, inqanaba lakho lokusebenza, kunye nebhajethi yakho. Njengoko limi, iSigaba seNkwenkwezi se-Yamaha sakha ezinye zezona zihamba ngokugqithiseleyo, ezinokubaluleka kakhulu ezinokuthengwa ngemali-kodwa ukuba zilungele wena kuxhomekeke ngokupheleleyo kwiimvakalelo zakho kunye nokuthandayo.
Iinkcukacha, Ngubani omele athenge i-V-Star 1300 Tourer?
I-Star Star V-Star ye-1300 Tourer ye-4.9-gallon fuel tank. Basem Wasef
Ixabiso: $ 12,390 (kuquka iibhedebags, isikrini somoya, umva emva)
Injini: ii-intshi ezingama-80 (i-1,304cc) i-crankpin enye-i-twin ye-crankpin enye
Uqoqosho lwe-Fuel (kulinganiselwa): 42 mpg
Iibhokisi zebhobho: I-manual-speed-5
Ukumiswa (phambili / kwangaphambili): 41mm ifowuniki ifom; 5.3-ukuhamba / ukutshatyalaliswa kwamanye; 4.3-ekuhambeni
Amabhuleki (phambi / kwangemuva): I-disc yesi-hydraulic disc, i-298mm / i-disdrawulic disc, i-298mm (akukho-ABS)
Amathayi (phambi / emva): 130 / 90-16 / 170 / 70B-16
Umbane we-Fuel: 4.9 gallons
Ukuphakama kwesihlalo: 27.2 intshi
Isisindo se-Curb: 712 iipounds
Iwaranti: 1 unyaka (umlinganiselo)
Ngubani omele athenge i-V-Star 1300 Tourer?
Iifili ze-cruiser zengqondo ezinokubaluleka nge-hankering for big, mellow v-twin impulse, iimfuno zomthwalo ezikhanyayo, kwaye zilungele impawu zokugibela iintsuku zonke.
Iinqwelo ezithintekayo ezithandathu
Isikhokelo sikaMthengi we-Harley-Davidson sika-2011
2009 Suzuki TU250X Ukuhlaziywa
I-Harley-Davidson Fat Boy Lo Ixesha elide Ixesha lokuQala # 1: Yitsho i-Hello to Fatty!
I-Hagerty Ininshurensi yenza iCandelo loVavanyo lweSithuthuthu
Uhlaziyo olupheleleyo: 2007 Uthando lweTiger 1050
Umhlahlandlela we-Harley-Davidson Buyer 2013
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiKholeji zaseMassachusetts eziphezulu
I-Safeway Open Tournament kwi-PGA Tour
Ngaba i-Amazon ehleliyo Imvula yamanzi iya kupheka?
Amazwe kunye neSizwe
Iilwimi zesiLatini - Ziyekile
I-French Past Pastor - Imperatif passé
Isikhokelo esifutshane kwiNkcazo yokuHlaziya
Ngaba amaSiks avumelekile ukuba baxube okanye bafake ama-Eyebrows abo?
Ukubhala iBhishino kunye neeNcwadi zoLuntu ngesiSpanish
Indlela yokuhlalutya umgca wefayili ngomgca ngePython
QHUBA - Igama elithi & Origin
I-X-37B ye-Orbiter Flies Imisebenzi Yemfihlo Yesikhala
Ingxabano KwiMigubho yoSuku lweColumbus
UKanoa Igarashi: I-Surfer's Biography
Iingcebiso eziPhambili zoVavanyo lweeNgcebiso zamaKristu asebasha
Columbia University GPA, SAT, kunye ne-ACT Data
Umntla kwiNtla yeMaphu
Iingcebiso eziphezulu ze-Painting 100+ zezobugcisa